पढ्नलाई उमेरले छेक्दैन, ७० बर्षको उमेरमा एमए पास, धेरैको लागी प्रेरणाको स्रोत – Eps Sathi
February 22, 2022 138
काठमाडौ । केही दिन अघि सम्पन्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४५ औँ दिक्षान्त समारोहको एउटा फोटो भाइरल भयो। पढाईलाई उमेरले छेक्दैन, प्रेरक पात्र, प्ररणाको स्रोत जस्ता क्याप्सनमा अधिकांश मानिसका सामाजिक सञ्जाल उहाँको यो फोटो भाइरल बन्यो। उहाँ हुनुहुन्छ ७० वर्षीया नानीमैयाँ श्रेष्ठ। त्रिविको ४५ औं दीक्षान्त समारोहबाट १० हजार १ सय ८३ विद्यार्थीसँगै नानीमैयाँ पनि दीक्षित हुनुभएको थियो।
पढाईलाई उमेरले छेक्दैन भन्ने कुरालाई देखाउन यथार्थ दुई फरक क्षेत्रबाट उदाएका महिला सेलिब्रेटीहरु पनि रहेका छन। कम्लहरी हुँदै राजनीतिमा उदाएकी संघीय सांसद शान्ता चौधरी र अर्की एक पात्र हुन् सदाबहार नायिका करिश्मा मानन्धर। अध्ययन सुरु गर्दाताका नै विद्यावारिधी (पिएचडी) सम्म पढ्ने अठोट शान्ता चौधरीले लिएकी थिइन।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले विश्राम खोज्दै गर्दा उनले पनि कम्लहरी जीवनबाट मुक्ति पाइन्। अर्थात् २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले मुलुकको व्यवस्था फेरेसँगै सांसद चौधरीको जीवनमा पनि टर्निङ प्वाइन्ट आयो। उनले कम्हलरी जीवनबाट त्यसपछि मात्रै मुक्ति पाइन्। तत्कालिन नेकपा एमालेबाट उनी सांसद भइन् पहिलो सविधान सभा सदस्य भएर।
अध्ययनको भोकलाई जीवनको मध्यतिर आएर मेटाउँदै गरेकी नायिका करिश्मा मानन्धरले पनि संघर्षको परिभाषा केही फरक रहेको बताउँछिन। कलेजबाट आउँदै गर्दा एउटा ७ वर्षको बच्चाले यस्तो बुढीले पनि के पढेको होला ! भनेको सुन्दा बच्चाप्रति भन्दा पनि उसलाई त्यस्तो विचार घुसाइदिने समाजप्रति हिनताबोध हुने करिश्मा बताउँछिन। १० प्रतिशत सकारात्मक मानिस हुन्छन् । पाँच प्रतिशत नकारात्मक हुन्छन् तर त्यहि पाँच प्रतिशत व्यक्तिको प्रभावमा अरु व्यक्ति परिरहेका हुने उनि बताउँछिन।
यसले हरेक मानिसलाई उमेरले छेक्दैन पढाई भन्ने सन्देश दिएको छ जीवनका सात दशक काटेपछि नानीमैयाँले पाटन क्याम्पसबाट नेपाल भाषामा स्नातकोत्तर गर्नुभयो । दीक्षान्त समारोहमा नानीमैयाँ धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नभयो । उहाँ ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानकी स्थायी बासिन्दा हो । भिडियो तल हेर्नुहोस
Prevकोरियामा कामदारको औषतमा प्रतिमहिना ३२ लाख कमाई, हेरौं कस्ता कम्पनीमा सबैभन्दा बढि कमाई रहेछ?
Nextकोरियामा आज कोरोना संक्रमणले बनायो रेकर्ड, थपिए अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित